सुन तस्कर गोरेका 'राइट ह्यान्ड' तिवारीः वकिलदेखि प्रहरीसम्मका सेटिङकर्ता! :: PahiloPost
सुन तस्कर गोरेका 'राइट ह्यान्ड' तिवारीः वकिलदेखि प्रहरीसम्मका सेटिङकर्ता!
8th June 2018, 11:54 am | २५ जेठ २०७५
काठमाडौं: सुन प्रकरणमा मंगलवार त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका ४६ वर्षीय राम तिवारी काठमाडौंका विभिन्न स्थान घर तथा जग्गा भएको खुलेको छ।
पेसाले जग्गा कारोबारी भए पनि उनको सम्पति भने अकुत देखिएको छ। चुडामणि उप्रेती 'गोरे'का मुख्य सहयोगी तिवारीको काठमाडौँको गौरीघाट र कोटेश्वरमा घर रहेको छ। त्यस्तै ठमेलमा पनि १० आनाभन्दा बढी जग्गा देखिएको छ। छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, 'छोटो समयमै तिवारीले सम्पति कसरी जोडे अनुसन्धान गर्दैछौं।'
सुन प्रकरण छानबिन समितिले तिवारीलाई पहिले पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो। तर अनुसन्धानमा सुन तस्करीमा संलग्न नभएको प्रमाण फेला नपरेपछि उनी छुटेका थिए। तिवारी छानबिन समितिबाट फुत्के लगतै दक्षिण कोरिया पुगेका हुन्। समितिका सदस्यले भने 'अहिले भने प्रमाण नै फेला पारेर पक्राउ गरेका हौँ।'
तिवारी गोरेका विश्वास पात्र हुन्। गोरेले लगानी गरेका जग्गाको कारोबार समेत उनैले रेखदेख तथा बिक्री गर्ने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।तिवारीको कालोपुल र कुपन्डोलमा मोटर ग्यारेज रहेको छ। कालोपुलको ग्यारेज भने साढे सात लाख रुपैयाँमा भाडामा दिएका छन्। समितका सदस्यले भने, 'पहिले आफै ग्यारेज चलाएका थिए। तर केही वर्षदेखि ग्यारेज भाडामा दिएको देखियो।'
तिवारीले गोरेसँग प्रहरी, वकिलदेखि सरकारी कर्मचारीसम्म सेटिङ मिलाउने गरेका थिए। गोरेले प्रहरीसँगको सेटिङ मिलाउन पनि उनै तिवारीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए।
तिवारीको गुण्डा नाईके गणेश लामासँगसमेत पार्टनरसिपमा काम गरेको देखिएको छ। लामा र तिवारी मिलेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको खुलेको छ। लामा हातहतियार खरखजना मुद्दामा हाल पूर्पक्षका लागि डिल्लीबजार सदरखोरमा छन्।
सुन तस्कर गोरेका 'राइट ह्यान्ड' तिवारीः वकिलदेखि प्रहरीसम्मका सेटिङकर्ता! को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।